आज विश्व कुष्ठरोग दिवस । जनवरी महिनाको अन्तिम आइतबार कुष्ठरोग दिवसलाई विश्वव्यापी रूपमा मनाउने चलन छ । ‘कुष्ठरोग सामान्य रोग हो, समयमा औषधि गरेपछि निको हुन्छ’, भन्ने सन्देशसहित नेपालमा पनि यो दिवस मनाइन्छ । कुष्ठरोग आँखाले देख्न नसकिने मायक्रोब्याक्टेरियम लेप्रे नामको सूक्ष्म किटाणुबाट लाग्ने एक प्रकारको ज्यादै कम सर्ने सरुवा रोग हो।
माइक्रो ब्याक्टेरियम लेप्रे किटाणुका कारण हुने यो रोगले मुख्य रूपमा छाला र स्नायुका टुप्पाहरू (विशेषगरी हात औँला) मा आक्रमण गर्छ । त्यसबाहेक, यसले नाकका भित्री भित्ता तथा माथिल्लो श्वासनलीमा पनि सङ्क्रमण गर्छ । यो रोगको किटाणुले सङ्क्रमण गरेपछि र हाम्रो शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता त्योसँग परास्त भएपछि छालामा नचिलाउने दागहरू देखा पर्छन् ।
यो रोग प्राचीन कालदेखि नै मानिससँग परिचित भए पनि सन् १८७३ मा मात्र नर्वेका वैज्ञानिक डा। जीए ह्यानसनले कुष्ठरोग किटाणुका कारणले हुने रोग हो भनी पत्ता लगाएका हुन्। यो रोगले छालामा असर गर्दा शरीरमा नचिलाउने, छुँदा थाहा नहुने दाग देखिने, छाला बाक्लो हुने, गिर्खाहरू देखा पर्नुका साथै स्नायुमा असर गर्दा हातगोडामा छुँदा थाहा नपाउने हुन्छ र विस्तारै यस रोगले मांसपेशी कमजोर बनाइदिन्छ। त्यस्तो छोएको थाहा नपाउने भागमा साधारण चोटपटक लाग्दा पनि छिटो निको हुँदैन।
यो रोग लागेपछि नसाहरू दुख्ने, हातखुट्टा झमझम गर्ने, कानको लोतीहरू बाक्लो हुने समस्या पनि देखिन्छ । यो रोगको पहिचान गर्न कान र दाग भएको ठाउँबाट पानी झिकेर किटाणु ब्याक्टेरियम लिप्रेको परीक्षण गरिन्छ । तर चिकित्सकको भनाइ अनुसार सबै रोगीमा यो किटाणु देखिन्छ नै भन्ने हुँदैन ।
कुष्ठरोग यसरी नै सर्छ भन्ने अहिलेसम्म कुनै पनि अनुसन्धानले स्पष्ट धारणा राख्न सकेको छैन । धेरै चिकित्सकहरूले रोगीको नाक तथा मुखबाट निस्किएका सिँगान, र्यालको माध्यमबाट यो रोग सर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । विशेष गरी, सङ्क्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाच्छ्युँ गर्दा यो रोग सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैगरी, सङ्क्रमणले अति बढी गाँजेका रेगीको फाटेको छालाबाट निस्केको पानीको सम्पर्कमा आउँदा पनि यो रोग सर्ने सम्भावना हुन्छ ।
खतरनाक कुरा के छ भने यो रोग लगाउने किटाणु माइक्रो ब्याक्टेरियम लेप्री कम तापक्रममा धेरै दिनसम्म पनि बाँच्न सक्छ । उपचार नगरेको कुष्ठरोगको बिरामीसँग लामो समयसम्म सम्पर्कमा आउने व्यक्तिलाई श्वास–प्रश्वासको माध्यमबाट यो रोग सर्न सक्छ। तर, यो निकै कम सरुवा रोग हो। साधारणतया यो रोग सरेको २ वर्षदेखि ५ वर्षभित्रमा यसका चिह्न र लक्षण देखा पर्न सक्छन्।
कुष्ठरोगको चिह्न र लक्षणहरु
शरीरको कुनै भागमा छुँदा थाहा नहुने फुस्रो वा हल्का रातो दागहरू देखा पर्नु शुरूको चिह्न हो। यसबाहेक अनुहार र कानका लोतीमा गिर्खाहरू देखिनु, छाला चम्किलो र बाक्लो हुनु तथा आँखीभौं झरेर जानु कुष्ठरोगका चिह्नहरू हुन्। अन्त्यमा अपाङ्गता हुन सक्छ। स्नायुमा असर पर्न जाँदा हात खुट्टाहरू लगातार झम–झम गर्नु, स्नायु सुन्निनु, दुख्नु, हातखुट्टा छुँदा थाहा नहुनु, मांसपेशीहरू
कुष्ठरोगले शरीरमा पार्ने असर
कुष्ठरोगको समयमा उपचार भएन भने अन्य रोगले जसरी नै शरीरको विभिन्न अङ्गमा समस्या पार्न सक्छ । कुष्ठरोग लागेको मान्छेलाई रोगको कारणले पनि रियाक्सन हुन सक्छ भने औषधिले पनि रियाक्सन हुन सक्छ ।
रियाक्सनलाई टाइप वान र टाइप टु गरेर दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । रियाक्सनले नसा सुन्निने, नसा दुख्ने, नसा झमझम गर्ने र बिस्तारै शरीरलाई अङ्गभङ्ग गराउन सक्ने अवस्थासम्म हुन्छ । समयमा उपचार नभएको खण्डमा हातका औँला बाङ्गो हुने हुन्छ । यो नसामा रियाक्सन भएर नसाले काम नगरेपछि हातका औँलाहरू बाङ्गो हुने हो ।
कुष्ठरोगका किटाणु शरीरमा लामो समयसम्म रहँदा हातको औँलाहरू झर्ने, दृष्टिविहीन हुने, किड्नीसम्मलाई असर गर्न सक्ने कृष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्ग व्यवस्थापन शाखाका कन्सल्टेन्ट डर्माटोलोजिस्ट डा. रवीन्द्र बाँस्कोटा बताउँछन् ।
कुष्ठरोगले पार्ने असरहरूलाई मोटामोटी निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
कपाल झर्नु (विशेष गरेर आँखीभौँ र परेलाका)
मांसपेशीहरू कमजोर हुनु
हात र खुट्टाका नसाहरू सधैँका लागि विग्रनु
हात र खुट्टा चलाउन नसक्नु
नाक बन्द हुनु, रगत बग्नु र नाक नै झर्नु
आँखा र आँखाको नानीमा सङ्क्रमण हुनु
आँखाका नसाहरू बिग्रनु र अन्धोसमेत बन्नु
पुरुषहरूको यौन क्षमता नष्ट हुनु
महिलाहरूमा बाँझोपन हुनु
मिर्गौला नै पनि काम नलाग्ने बन्नु
दुई किसिमको उपचार
त्यसो त यो रोग अरू सङ्क्रामक रोगकको तुलनामा कम खतरनाक पनि मानिन्छ किनभने यो रोग अरू रोगजस्तै तुरुन्त सरिहाल्ने खालको चाहिँ हुँदैन । फेरि यसको उपचार पनि तुलनात्मक रुम सजिलो हुन्छ । विभिन्न थरीका एन्टिबायोजिकहरूको संयुक्त मात्रा दिएर यो रोगको उपचार गरिन्छ । कुनै परिवारका सदस्यमा कुष्ठरोग भेटिएको छ भने दोस्रो व्यक्तिलाई रोग सर्न नदिनका लागि लेप्रोसी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफेलेक्सिस (एलपेप) अन्तर्गत एक मात्रा औषधि खुवाए रोग सर्ने सम्भावना ६० प्रतिशतसम्म कम हुन्छ भनेर चिकित्सा विज्ञानले मान्छ ।
यो रोग कम किटाणु भएको प्यासी ब्यासेलरी (पीबी) र बढी किटाणु भएको मल्टी ब्यासिलरी (एमबी) गरी दुई प्रकारको हुन्छ । नेपालमा पीबीभन्दा पनि एमबीको कुष्ठरोगीहरू धेरै रहेका छन् । पीबी छालामा ‘हाइपोपिग्मेन्टेसन’ वा बढी दागका कारण चिनिन्छ ।
ती ठाउँको स्नायु क्षतिग्रस्त भएर छाला लाटो हुन्छ । एमबीको तीव्रता ठिकैको हुनुका साथै यसमा छालामा दाग पीबीजस्तै देखिन्छ । तर त्यो धेरै बढी सङ्ख्यामा र अनियमित हुन्छ । रोग दुई किसिमको भए जस्तै उपचार पनि दुई किसिमकै हुन्छ । पीबी कुष्ठरोगको उपचार ६ महिनासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ भने एमबीको उपचार पीबीकोभन्दा दोब्बर १२ महिनासम्म उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उपचार पछि कुष्ठरोग पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ ।
कुष्ठरोगको सबै प्रकारको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्दै आइरहेको छ । नेपाल सरकारको सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट कुष्ठरोगको औषधि निःशुल्क पाइन्छ । उपचारपछि यातायात खर्चबापत बिरामीलाई एक हजार प्रदान गर्ने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको कुष्ठ रोग नियन्त्रण तथा अपाङ्ग शाखाले जनाएको छ । जुनसुकै कुष्ठरोग उपचारपछि किटाणु पूर्णरूपमा नष्ट पार्न सकिन्छ । तर अङ्गभङ्ग नै भएको अवस्थामा भने औषधिभन्दा पनि अप्रेसन नै गर्नुपर्ने र शरीरलाई पहिलाको अवस्थामा ल्याउन नसके पनि केही मात्रामा सामान्य रूपमा फर्काउन सकिने डा. रवीन्द्र बाँस्कोटाले बताए ।
कुष्ठरोग सर्ने रोग हो । तर यो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई सर्ने सम्भावना एकदमै कम अर्थात १ प्रतिशत हुन्छ । अर्थात् अन्य सरुवा रोगको तुलनामा निकै कम सर्ने रोग हो । कुष्ठरोग कुरा गर्दा, हात मिलाउँदा, सँगै बस्दा आजको भोलि नै सर्ने रोग भने होइन । शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता बलियो छ भने कुष्ठरोग सर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । कुष्ठरोग सर्ने प्रमुख माध्ययम भनेको श्वासप्रश्वास हो ।